Kaamirooyin Qarsoon oo lagu xiray xarunta lagu qabanayo Doorashada iyo Ujeedka ka dambeeya oo la ogaaday - iftineducation.com
iftineducation.com – Warar lagu kalsoonaan karo oo heshay Shabakada Allbanaadir.com ayaa sheegaya in Kaamirooyinka qarsoon ee loo yaqaan CCTV lagu xiray qeybo badan oo kamid ah xarunta lagu qabanayo doorashada Madaxweynaha Soomaaliya.
Kaamirooyinkan ayaa si gaar ah loogu xiray qeybo kamid ah hoolka Doorashada ayka dhaceyso ee ku taala xerada Ciidanka Cirka ee Afisiyooni, waxaana kaamirooyinkaasi loogu tala galay in lagula socdo dhaq dhaqaaqa xarunta iyo Musharaxiinta sameenaya musuq maasuqa.
Sida aan xogta ku heleyno kaamirooyinkan ayaa loogu tala galay in lagu ogaado dadka wada ololaha Musharaxiinta inta ay socoto doorashada, waxaa sidoo kale looga gon leeyahay on looga hortago in lacago lagu kala qaato gudaha hoolkaasi.
Xubno katirsan Guddiga doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ayaa laga soo xigtay in aan la ogeyn in wax olole ah lagu dhax sameeyo xarunta doorashada ay ka dhaceyso, waxa ayna tilmaameyn cidii lagu qabtaa arintaasi in tilaabo laga qaadayo.
Sida horey u dhacday Xarumaha ay ka dhacaan Doorashooyinka Soomaaliya ayaa marar badan lagu dhax arkay dad sameenaya olole sidoo kale bixinaya dhaqaale ay ku kasbanayaan xubnaha codkooda la doonayo.
Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ee lagu wado in la qabto 8-da bishan oo ku beegan maalinta arbacada ah ayaa ah mid adag oo si weyn indhaha loogu hayo lagana war dhoorayo cida kusoo bixi doonta Madaxweynaha Soomaaliya.